Manazava ny fomba fampiasana tranokala tranonkala ny Semalt Expert
Andro vitsy mpikaroka amin'ny Internet no miezaka mahita loharano maro amin'ny tranonkala isan-karazany mba hamitana ny tetikasany ary tonga amin'ny valiny mahaliana izay afaka manampy azy ireo hanatsara ny orinasa. Mba hanaovana izany dia mampiasa tranokala izy ireo. Teknika vaovao sady lehibe izany, izay manampy azy ireo hanangona vaovao avy amin'ny tranonkala isan-karazany. Amin'izany fomba izany, afaka manangona banky goavana be amin'ny angon-drakitra manan-danja izy ireo nefa tsy voatery manao ny asa manontolo. Ity manaraka ity dia mpitari-dalana lehibe mikasika ny fomba ahafahan'izy ireo mampiasa ny tranonkala.
Ahoana ny fomba hanakanana ireo tranokala
Raha te hanakombona ny antsipirian'ny fifandraisana na ny vidin'ny vokatra na lisitra hafa, dia mila mampiasa tranonkala. Amin'ny alalan'ny fampiasana tranonkala, ny asa dia atao amin'ny famoronana fitsipika (fantatra ihany koa amin'ny hoe 'sasatra'). Ity scraper ity dia manao ny asa rehetra ho an'ny mpikaroka web. Ohatra, mikaroka ny fampahalalam-baovao manan-danja izay tadiavin'ireo mpampiasa ao anatin'ireo antontan-taratasy maromaro ary manova azy ireo amin'ny endrika voafaritra. Ireo tahirin-kevitra ireo dia mety amin'ny endrika sary, lahatsoratra, vokatra, mailaka, adiresy an-tariby, vidiny ary maro kokoa.
Zavatra manan-danja ho an'ny fahalalahana
Ireo olona maniry ny manakiana ireo tranonkala dia mila mahafantatra fa ny pejy rehetra dia tsy mitovy ary manana ny fepetra sy fepetra manokana. Ohatra, ny tranonkala sasany dia matetika manova ny endrik'izy ireo indraindray. Ny fitazonana ireo fiovana rehetra ireo dia mitaky ezaka be sy ora maro miasa. Ireo mpikaroka amin'ny Internet koa dia mila mitandrina tsara mba hanaraka ny fitsipika. Raha tsy izany, mety manana olana izy ireo. Raha manao izany izy ireo dia afaka maka votoaty ao anatin'ny minitra vitsy amin'ny tranokala samihafa manerana ny aterineto.
Fintino ny fampahalalam-baovao mahasoa
Ny fanasitranana ny tranonkala dia manome fitaovana mahomby ho an'ny orinasa sy ny tsirairay mba hanaovana fikarohana ara-barotra. Ireo fitaovana manokana dia afaka manampy azy ireo hahazo ny antontan-kevitra rehetra ilaina amin'ny asany, handinika azy ireo tsara ary hahazo ny valiny tadiaviny. Vokatr'izany, afaka mandresy ny mpifaninana aminy izy ireo ka afaka manatsara ny fivarotana azy ireo amin'ny fotoana tsy voafetra. Amin'ny fampiasana fitaovana fandinganana tranonkala dia azony atao ny manangona lisitra isan-karazany amin'ny orinasa na mpamatsy, sy ny vokatra ary voatahiry ao anaty rakitra.
Amin'ny fampiasana ireo fitaovana mahasalama , ireo mpikaroka web dia afaka mamoaka vahaolana samihafa mba hamakiana offline. Izany dia afaka mamonjy azy ireo amin'ny fotoana maro ary avy eo afaka mamaky azy ireo izy ireo ary mandinika avy amin'ny fampiononana amin'ny ordinaterany amin'ny alalan'ny fanindriana fotsiny ny bokotra iray. Mamonjy ora maro izy ireo amin'ny fiezahana hitady ireo data rehetra ireo. Vokatr'izany, tsy dia miankina amin'ny fifandraisana amin'ny Internet izy ireo, satria afaka mamaky ny loharanon-kevitr'izy ireo any aoriana.
Mitadiava Olona Manana Olona
Mpitarika maro ankehitriny no miezaka mitady kandidà manam-pahaizana hanatevin-daharana ny ekipany na ireo mpikatsaka asa mitady izay hahitana olona. Rehefa mampiasa ireo fitaovana ireo izy dia afaka mahita mora ny olona tadiaviny.
Hitady haingana ny vidin'ny vokatra vokarin'ny vokatra
Raha mikasa ny hanaraka ny vidin'ny vokatra sasany izy ireo, amin'ny alalan'ny fampiasana tranonkala dia afaka mahita azy ireo automatique. Ny fanalana ny tranonkala dia afaka manampy azy ireo hanaraka ny vidiny rehetra ilainy amin'ny magazay sy tsena amin'ny aterineto Source .